I-Meriwther Cabin e-Riverview Campground - I-Airbnb
I-Meriwther Cabin e-Riverview Campground
Guntersville, Alabama, i-United States
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Craig
I-Meriwether Cabin isenkabeni yepulazi elingama-acre angu-200, manje okuyindawo yokuzijabulisa engasechibini, enendawo enkulu yokukhempa, amahlathi nezindlu ezakhiwe ngamapulangwe. Yindlu yeselula elungiswe ngokuphelele. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe iseduze ne- “Nivendale at Riverview Campground” Cabin, naku-Airbnb. Laba ababili bangaqashiswa ndawonye, emaqenjini amakhulu.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ingeyesimanjemanje futhi ihlotshiswe kahle. Kukhona izinto zikagesi ezintsha nefenisha. Amagumbi okugezela amabili aneshawa enkulu/obhavu kanye nezindlu zangasese zesihlalo esandisiwe.
Singuhambo lwezinyawo olufushane ukusuka ogwini lwe-Riverview campground, esingumnikazi wayo, olugcwele ukufinyelela echibini lokudoba, ukuhamba ngesikebhe, ukuhamba ngesikebhe, ukubhukuda njll. namamayela amabili ukusuka edolobheni elihle lase-Guntersville. Sizungezwe ichibi ekuphileni okukodwa namahlathi nezilwane zasendle ngakolunye uhlangothi.
Siphila ngokulandelayo-ngaphandle futhi siyakujabulela ukubonisa izivakashi indlu yethu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Guntersville namaphethelo